အဘိုးအသက်​ ၈၄ နှစ်​ အဖွားအသက်​ ၇၆ နှစ်​တို့ရဲ့​မောင်​တထမ်း မယ်​တရွက် - 9style
Home/အထွေထွေဗဟုသုတ/အဘိုးအသက်​ ၈၄ နှစ်​ အဖွားအသက်​ ၇၆ နှစ်​တို့ရဲ့​မောင်​တထမ်း မယ်​တရွက်
အဘိုးအသက်​ ၈၄ နှစ်​ အဖွားအသက်​ ၇၆ နှစ်​တို့ရဲ့​မောင်​တထမ်း မယ်​တရွက်
မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို..​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ..အခု​နောက်​ပိုင်း အဘ ကိုယ်​တိုင်​ ​အော်​​’နေပြီ​လေ…သူတို့လင်​မယားကို သ​ဘောကျတယ်​​…မလှိုင်​နားရွာတစ်​ရွာက ဇာတိတဲ့…သား​ထောက်​သမီးခံ မရှိ…အဘ အသက်​ ၈၄ နှစ်​ အဖွားအသက်​ ၇၆ နှစ်​ တဲ့… သူတို့ကို မြင်​တိုင်း ​တွေးမိတာ…တစ်​ကယ့်​ကို ​မောင်​တထမ်း မယ်​တရွက်​ပါပဲ…အဖွားက ဒူးမ​ကောင်းလို့ လမ်း​ကောင်း​ကောင်းမ​လျှောက်​နိုင်​ဘူး​လေ…တစ်​မနက်​​လေး​ရောင်းရင်​ အမြတ်​ ၃၀၀၀ ကျပ်​ပဲ ရသတဲ့…လမ်း​လျှောက်​ဖြစ်​​အောင်​ မနက်​တိုင်း​ ရောင်းတယ်​လို့ အဘက ​ပြောတာပဲဘဝတစ်​ခုမှာ အသွင်​လည်း​တူတဲ့….ဘဝတ​လျှောက်လုံးအတွက် ​​မှန်​ကန်​တဲ့ အ​ဖော်​မွန်​ကောင်း ​​တစ်​​ယောက်​ရဖို့ ဆိုတာ…အင်​မတန်​မှ ခက်​ခဲလှပါတယ်​…လူ့ပြည်​က အပ်​တစ်​စင်းနဲ့ နတ်​ပြည်​က အပ်​တစ်​စင်း ဆုံဖို့ မလွယ်​သလိုပဲ…
အများစုက အိမ်​​ထောင်​ပြုချိန်​တန်​လို့ ပြုလိုက်​ကြတာ…မိဘ စိတ်​ချမ်းသာ​စေဖို့ ပြုတာ…ကိုယ့်​ကို အမှန်​ချစ်​တယ်​ ထင်​လို့ ပြုတာ…အဲ့လို​တွေ ကြားထဲမှာ….ကိုယ့်​ကို ​ပျော်​ရွှင်​​စေမယ့်​…ကိုယ့် ​ပျော်​ရွှင်​မှုကို အမှန်​ တန်​ဘိုးထား လိုလားတဲ့ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ထက်​ပိုတဲ့ အ​ဖော်​မွန်​​ကောင်းရရှိဖို့ဟာ သိပ်​ကို ခက်​ခဲလှပါတယ်​တချို့​တွေလည်း ကံစွပ်​ပြီး မှန်​ကန်​သွားကြတာ ရှိ​ပေမယ့်​ …၆၀% ​သော ဒီက အိမ်​​ထောင်​​ရေး​တွေက​တော့…သားသမီး​ကြောင့်​…​စောင့်​ထိန်းရမယ့်​ ကျင့်​ဝတ်​​ကြောင့်​…မိဂုဏ်​ ဖဂုဏ်​​ကြောင့်​…​ဆွေဂုဏ်​ မျိုးဂုဏ်​​ကြောင့်​…ဝတ္တရား​ကြောင့်​… စတဲ့…စတဲ့ `​ကြောင့်​´ ​တွေ​ကြောင့်​ ​ပျော်​ရွှင်​မှု​တွေ မရရှိ​တော့သည့်​တိုင်​…
သည်းခံ မြိုသိပ်​ ​ပေါင်းဖက်​​နေရတဲ့ အိမ်​​ထောင်​ရေး​​ အ​ခြေအ​နေ​တွေ ကြားထဲမှာ….ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖွားရယ်​…မြန်​မာပြည်​သိန်းတန်​ တို့ ဇနီး​မောင်​နှံ ရယ်​က​တော့…​တွေ့မြင်​ဖူးသမျှထဲမှာ…အမှန်​ကို နတ်​ဖက်​တဲ့ ဖူးစာရယ်​ပါ….တချို့ဆို ဘဝ​နေဝင်​ချိန်​ ​ရောက်​သည်​အထိ ကိုယ်​နဲ့ လိုက်​ဖက်​တဲ့ အသည်းတစ်​ခြမ်း ကို လုံးလုံး ရှာမ​တွေ့သွားကြပါဘူး….😥အိမ်​​ထောင်​တစ်​ခု အတွက်​ အ​ခြေခံကျဆုံးက နှစ်​​ယောက်​စလုံးက ကိုယ့်​ကမ္ဘာကချည်း ကြည့်​ပြီး ​တောင်းဆို​နေလို့ မရဘူး​လေ…
တဖက်​သားကမ္ဘာ​လေးကိုလည်း ခံစား​ပေးတတ်​အုံးပါမှ…နှစ်​​ယောက်​လုံး ညှိနှိုင်းလို့ ရဖို့ကလည်း …စိတ်​အ​ခြေခံ​တွေ ခံယူချက်​​တွေ မ​ဝေးကွာပါမှ…သိပ်​ကွာ​ဝေးလွန်းပြန်​လည်း…ဘယ်​လိုမှ ညှိလို့မရဘူး​လေ…အ​ခြေခံ တန်း​လေးတစ်​ခု တူပါမှဒီ​နေ့​တွေးမိတာ​လေးပါ…ဘဝတစ်​ခု သူများ​တွေ တိုင်းတာတဲ့…စံနှုန်း​တွေ​လောက်​ ပြည့်​စုံကြွယ်​ဝ ချမ်းသာမှု မရှိကြ​ပေမယ့်​…အိမ်​​ထောင်​ဖက်​တစ်​ဦးထက်​ ပိုတဲ့…ဘဝအ​ဖော်​မွန်​​ကောင်း တစ်​ဦးရဲ့…​ဖေးကူမမှု​တွေနဲ့ ….အ​ပေးအယူမျှပြီး စိတ်​ချမ်းသာ​နေတဲ့ ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖွားရဲ့ အိမ်​​လေးဟာဖြင့်​…သေးငယ်​​ပြီး မထည်ဝါ​သည့်​တိုင်​…>>>”​မေတ္တာ​တွေ လွှမ်းခြုံတဲ့ အိမ်​”“နှလုံးသား​တွေ ​နွေး​ထွေး​လုံခြုံစေတဲ့ အိမ်​” ဖြစ်​​နေမှာ ဧကန်​မလွဲ ပါပဲ…💞 ​ဒီလိုအိမ်​💞Credit-Original Uploader
အဘိုးအသကျ ၈၄ နှဈ အဖှားအသကျ ၇၆ နှဈတို့ရဲ့မောငျတထမျး မယျတရှကျ
မနကျဆို မိနျးမ ပဲပွုတျသညျ အသံတှကွေားမှာ “ပဲပွုတျ နံပွား” ဆိုတဲ့ အဘ အသံကွားပွီဆို..ပွေး ပွေးဝယျရတာ အမော….အရငျကတော့ အဖှားက အျောပေးတာပါ..အခုနောကျပိုငျး အဘ ကိုယျတိုငျ အျော’နပွေီလေ…သူတို့လငျမယားကို သဘောကတြယျ…မလှိုငျနားရှာတဈရှာက ဇာတိတဲ့…သားထောကျသမီးခံ မရှိ…အဘ အသကျ ၈၄ နှဈ အဖှားအသကျ ၇၆ နှဈ တဲ့… သူတို့ကို မွငျတိုငျး တှေးမိတာ…
တဈကယျ့ကို မောငျတထမျး မယျတရှကျပါပဲ…အဖှားက ဒူးမကောငျးလို့ လမျးကောငျးကောငျးမလြှောကျနိုငျဘူးလေ…တဈမနကျလေးရောငျးရငျ အမွတျ ၃၀၀၀ ကပျြပဲ ရသတဲ့…လမျးလြှောကျဖွဈအောငျ မနကျတိုငျး ရောငျးတယျလို့ အဘက ပွောတာပဲဘဝတဈခုမှာ အသှငျလညျးတူတဲ့….ဘဝတလြှောကျလုံးအတှကျ မှနျကနျတဲ့ အဖျောမှနျကောငျး တဈယောကျရဖို့ ဆိုတာ…အငျမတနျမှ ခကျခဲလှပါတယျ…လူ့ပွညျက အပျတဈစငျးနဲ့ နတျပွညျက အပျတဈစငျး ဆုံဖို့ မလှယျသလိုပဲ…
အမြားစုက အိမျထောငျပွုခြိနျတနျလို့ ပွုလိုကျကွတာ…မိဘ စိတျခမျြးသာစဖေို့ ပွုတာ…ကိုယျ့ကို အမှနျခဈြတယျ ထငျလို့ ပွုတာ…အဲ့လိုတှေ ကွားထဲမှာ….ကိုယျ့ကို ပြျောရှငျစမေယျ့…ကိုယျ့ ပြျောရှငျမှုကို အမှနျ တနျဘိုးထား လိုလားတဲ့ အိမျထောငျဖကျထကျပိုတဲ့ အဖျောမှနျကောငျးရရှိဖို့ဟာ သိပျကို ခကျခဲလှပါတယျတခြို့တှလေညျး ကံစှပျပွီး မှနျကနျသှားကွတာ ရှိပမေယျ့ …၆၀% သော ဒီက အိမျထောငျရေးတှကေတော့…သားသမီးကွောငျ့…စောငျ့ထိနျးရမယျ့ ကငျြ့ဝတျကွောငျ့…မိဂုဏျ ဖဂုဏျကွောငျ့…ဆှဂေုဏျ မြိုးဂုဏျကွောငျ့…ဝတ်တရားကွောငျ့… စတဲ့…စတဲ့ `ကွောငျ့´ တှကွေောငျ့ ပြျောရှငျမှုတှေ မရရှိတော့သညျ့တိုငျ…
သညျးခံ မွိုသိပျ ပေါငျးဖကျနရေတဲ့ အိမျထောငျရေး အခွအေနတှေေ ကွားထဲမှာ….ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖှားရယျ…မွနျမာပွညျသိနျးတနျ တို့ ဇနီးမောငျနှံ ရယျကတော့…တှမွေ့ငျဖူးသမြှထဲမှာ…အမှနျကို နတျဖကျတဲ့ ဖူးစာရယျပါ….တခြို့ဆို ဘဝနဝေငျခြိနျ ရောကျသညျအထိ ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အသညျးတဈခွမျး ကို လုံးလုံး ရှာမတှသှေ့ားကွပါဘူး….😥အိမျထောငျတဈခု အတှကျ အခွခေံကဆြုံးက နှဈယောကျစလုံးက ကိုယျ့ကမ်ဘာကခညျြး ကွညျ့ပွီး တောငျးဆိုနလေို့ မရဘူးလေ…
တဖကျသားကမ်ဘာလေးကိုလညျး ခံစားပေးတတျအုံးပါမှ…နှဈယောကျလုံး ညှိနှိုငျးလို့ ရဖို့ကလညျး …စိတျအခွခေံတှေ ခံယူခကျြတှေ မဝေးကှာပါမှ…သိပျကှာဝေးလှနျးပွနျလညျး…ဘယျလိုမှ ညှိလို့မရဘူးလေ…အခွခေံ တနျးလေးတဈခု တူပါမှဒီနတှေ့ေးမိတာလေးပါ…ဘဝတဈခု သူမြားတှေ တိုငျးတာတဲ့…စံနှုနျးတှလေောကျ ပွညျ့စုံကွှယျဝ ခမျြးသာမှု မရှိကွပမေယျ့…အိမျထောငျဖကျတဈဦးထကျ ပိုတဲ့…ဘဝအဖျောမှနျကောငျး တဈဦးရဲ့…ဖေးကူမမှုတှနေဲ့ ….အပေးအယူမြှပွီး စိတျခမျြးသာနတေဲ့ ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖှားရဲ့ အိမျလေးဟာဖွငျ့…သေးငယျပွီး မထညျဝါသညျ့တိုငျ…>>>”မတ်ေတာတှေ လှမျးခွုံတဲ့ အိမျ”“နှလုံးသားတှေ နှေးထှေးလုံခွုံစတေဲ့ အိမျ” ဖွဈနမှော ဧကနျမလှဲ ပါပဲ…💞 ဒီလိုအိမျ💞Credit-Original Uploader
လူတိုင်း မချမ်းသာနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြနေတဲ့ ထမင်းဆိုင်လေး နှစ်ဆိုင်
ထိုငျနိုငျငံမှာ မွနျမာအလုပျသမားပေါငျး ၂၀၀ ကြျော အလုပျဖွုတျခံ လိုကျရတဲ့ ဖွဈစဉျ
ပနျးကနျဆေးရငျ စတီးစလေးတှကေို သတိထား
မြွေဘေးကဖားကို ကယ်တာ ကုသိုလ်လား၊ အကုသိုလ်လား ? ဒီစာလေးကိုသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ အမြင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်!!!